Umthelela woshwele kwabanezikweletu | Bayede News
Home/ iBayede Kuleli Sonto/Umthelela woshwele kwabanezikweletu
Abamabhange kubathukuthelisile ukuphasiswa komthetho ozocisha izikweletu
Ukuphasiswa kwalo mthetho kubonakala njengemizamo yokuhlangabezana nesimo esinzima ezweni sabantu abaningi abangasebenzi nabacwile ezikweletini, kubhala uNGQESHE BUTHELEZI
ININGIZIMU Afrika inesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi okufakazelwa nayiStatistics South Africa ngezibalo zakamuva eziveza ukuthi isibalo sabangasebenzi simi kuma-27,6. Uma uzibheka lezi zibalo ngokwezifundazwe, zikhomba ukuthi zonke izifundazwe zibhekene nesimo esifanayo sokwentuleka kwemisebenzi.
Ngokucaphuna embikweni weStats SA, izifundazwe ezihamba phambili ngokuswelakala kwemisebenzi i-Eastern Cape neFree State ngamaphesenti angama-37,4 nangama-34,9 ngokulandelana. Lapho kuthanda ukuthi isimo sibe ncono khona kuseLimpopo naseWestern Cape ngamaphesenti ali-18,5 nali-19,5 ngokulandelana. Zimbili vo izifundazwe ongathi zicishe zazama ukwenza umehluko nawo omncane kakhulu okuyiGauteng kanye neKwaZulu-Natal okumi ku-0,1 no-0,5 wamaphesenti. Ngokwezinombolo lesi sibalo siphansi kakhulu futhi lezi zifundazwe zinamathuba amaningi okwenza kancono.
Ezifundazweni eziyisithupha isimo sibi kakhulu ngenxa yokuthi nomnotho kuzo ufadalele. Ngokuqala ngokungenisa lolu daba ngokuveza isithombe sabantu abangasebenzi ezweni, sizama ukucacisa ukuthi kubi kangakanani. Kulezi zibalo kukhona abantu abebesebenza baphelelwa imisebenzi ngezizathu ezahlukene. Akumangazanga ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa aqoke abantu baseNingizimu Afrika abasembethe usizi phezu kwezinkampani ezinkulu ezitshelekisa ngezimali njengoba egcine ewusayinile umthethosivivinywa wokuxegisela izikweletu abangasebenzi nabangakwazi ukuzikhokha owaziwa ngeDebt -Relief Bill njengoba usunguMthetho iNational Credit Amendment Bill.
Iningi labantu ezweni licwile ezikweletini okungelula ukuphuma kuzo ngenxa yokuntenga kwesimo somnotho. Kokunye ukufaka igama lomuntu osehluleka ukukhokha isikweletu ngaphansi kohlu labanamagama amabi akusizi ekukhokheni isikweletu ngoba kakade lowo muntu usuke engeke esakwazi ukuvula isikweletu ngoba engasebenzi.
Ngalo Mthetho kusho ukuthi noma ngubani ongowaseNingizimu Afrika onesikweletu ebhange noma kunoma yisiphi isikhungo esibhalisile esitshelekisa ngemali uma engasebenzi noma engakwazi ukusikhokhela futhi enobufakazi balokho kumele sisulwe. Ngaphezu kwalokho uma umuntu ehola imali eyizi-R7, 500 ngenyanga enesikweletu esevile kuma-R50 000 noma kutholwa ukuthi usecwile ezikweletini ngale ndlela ngabeNational Credit Regulator, leso sikweletu kuyomele sicishwe.
Okunye ngalo Mthetho uzonikeza abakweletayo ilungelo lokwelula isikhathi sokukhokha izikweletu zabo noma bakumise ukuzikhokhela isikhathi esiyizinyanga ezili-12 kuya kwezingama-24 ngesikhathi kusahlolwa isimo sakho sezimali. Isikweletu siyaqedwa nya uma sekuphele iminyaka emibili kucaca ukuthi umuntu uyahluleka ukusikhokhela
Lo Mthetho uphinde unike amandla izimantshi ezinkantolo zokwehlisa inzalo yemali mboleko ize ifinyelele ku-0%.Uma kuhlanganiswa izikweletu ezikubantu abangakwazi ukuzikhokha kuvela ukuthi ziphakathi kwe-R13.2 billion nama-R20 billion. Okuhle ngalo mthetho ukuthi awubheki ukuthi isikweletu ngesanini nokuthi sesinesikhathi esingakanani senziwa.
Kubantu abasezikweletini abangakwazi ukuzikhokha uRamaphosa ube ngumlamuleli ngoba lokho kuzobasiza ekutheni bangazitholi sebegqigqa ezinkantolo noma sebedlelwa impahla, okanye kufane nokuthi bagcwatshwe bephila ngoba bengeke besakwazi ukuvula izikweletu ezitolo batsheleke nemali emabhange.
Ngokuphasisa lo Mthetho uRamaphosa wenze lokhu okufanele engabe kwenziwa izinyunyana ezimele abasebenzi esezijike zaphendula “izinkampani” zokuzicebisa zabathile eyabasebenzi yeza kamuva.
Nakuba iCosatu ibike izwakale iphufumula ngalo shwele, kodwa bekumele kube yiyo engabe yaqala lo mkhankaso wokuba kulekelelwe abangakwazi ukukhokha izikweletu kwasekuqaleni, kodwa isizwakala isihamba phambili ekwamukeleni lolu shintsho.
Abantu abazozithola besenkingeni ngokusala nezikweletu ngoba bengavikelekile ngaphansi kwalo Mthetho ngabatsheleka imali komashonisa abangabhalisiwe nezinye izikhungo zokutshelekisa ngemali ezingabhalisile. Nakuba abantu bezijabulela lezi zinguquko, kodwa lihlabe lezwela kwabamabhange abazolahlekelwa kakhulu.
Angeke kugcine lapho, amabhange azoqinisa isandla kubantu abazotsheleka imali ikakhulukazi uma behola kancane noma kuvela ukuthi banezinye izikweletu abangeke bakwazi ukuqhubeka nokuzikhokha. Okunye okuzokwenzeka ukuthi amabhange azofuna izibambiso ezinkulu njengemizi noma ngabe imali abakutsheleka yona incane kangakanani.
Kukhona abaveza ukuthi omashonisa nezinkampani ezitshelekisa ngemali ezingabhalisile zizoqhubeka nokuxhaphaza abantu ngoba bazochithwa emabhange babalekele kuzo. IBanking Association of South Africa ngolunye uhlaka olunengekile ngalo mthetho ngokuba umthelela wawo uzodala omkhulu umonakalo ezweni.Lolu hlaka luthi uRamaphosa uxhamazelile ngokuphasisa lo mthetho.
“Sesibhalele uMengameli izikhathi eziningi simnxusa ukuba angawuphasisi lo mthetho ukulesi simo okuso ngoba kungafike kuvele izinto ezithile uma usubhekwa uqondaniswe noMthethosisekelo. Kuningi esikubhekile njengokuthi ungaba namthelela muni kwezomnotho,” kusho uCas Covadia.
ICongress of South African Trade Unions (Cosatu) esiyibamba emsileni ixwayisa abantu abazothola lo shwele ukuthi bangalixhaphazi leli thuba ngokwenza ezinye izikweletu phezu kwezinye ngoba nakhe sebazi ukuthi umthetho usuyasebenza.
UMnu uMathew Parks ongumxhumanisi weCosatu nePhalamende uthi abantu akumele bahumushe lo mthetho njengehawu lokuphuma emaketangeni. “Akumele sicabange ukuthi sesizokwenza noma yikanjani sivule izikweletu umathanda singanaki ngoba sizitshela ukuthi sekukhona umthetho osivikelayo. Kumele abantu baqonde nokuthi uma sebefake isicelo sikashwele angeke besakwazi ukufaka izicelo zokutshelekwa imali emabhange”.
IDemocratic Alliance (DA) yakusho ekuqaleni ukuthi ayihambisani nalo mthetho ngoba esikhundleni sokusiza abantu ibona uphambana noMthethosisekelo wezwe. Leli qembu likholwa ukuthi lo mthetho uzokwenza ibe buthaka impi yokulwa noqhibukhowe bezikhungo ezingabhalisiwe zokutshelekisa ngemali. IDA ithi ikhathazekile ngokuthi izophumaphi imali ezoxhasa iNational Credit Regulator neNational Consumer Tribunal ukuze kuqedwe zonke izikweletu okukhulunywa ngazo zabantu.